HomeHoryaalka ItalyHordhac: Inter Milan Vs Juventus, Kulanka ugu Adag Todobaadkan Serie A, Matthijs de Ligt oo soo laabtay
October 24, 2021 Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Inter Milan ayaa Garoonkeeda ku soo dhaweeneysa kooxda Juventus kulan ka tirsan Serie A Italy, Derby d’Italia ayaana Sanadkan ka duwan sanadkii hore iyadoo Xidigaha sida Lukaku iyo Ronaldo ay liiska ka maqanyihiin.
Juventus ayaa dib u soo noolaatay ka dib markii ay badisay lix kulan oo isku xiga waxayna dooneysaa inay ka aarsato guuldaradii Scudetto ee Inter Milan xilli ciyaareedkii hore.
Ka dib markii Matthijs de Ligt uu ka soo laabtay dhaawacii bartamihii isbuuca, Paulo Dybala ayaa kula biiraya daafaca reer Holland kooxda Juventus ee u safreysa Lombardy.
Alvaro Morata ayaa sidoo kale dib u soo kabanaya sidaas darteed Max Allegri waxa uu heystaa dookh badan oo seddexaad ee ugu dambeeya, halkaas oo uu qarka u saaran yahay inuu ku daro Federico Chiesa.
Natiijo ahaan, Moise Kean iyo Dejan Kulusevski ayaa kursiga keydka lagu soo bilaabidoonaa, iyadoo ay weheliyaan Dybala, laakiin waa inay filayaan inay ku lug yeeshaan qeybaha dambe.
Inkastoo De Ligt uu taam yahay mar kale, waxaa laga yaabaa inuu u banneeyo lammaaneyaasha da ́da ah ee Leonardo Bonucci iyo Giorgio Chiellini si ay dib ugu midoobaan qalbiga afarta dambe ee kooxda martida ah.
Inter si la mid ah uma saameyso dhaawacyada ciyaartoy waaweyn, laakiin Hakan Calhanoglu ayaa kaliya ku soo laabtay tababarka khamiistii waana inay la tartamaan laacibkii hore ee Juve Arturo Vidal si uu boos uga helo khadka dhexe. Xiriiriyaha qolka mishiinka Stefano Sensi ayaa ka soo laabtay dhaawac jilibka ah toddobaadkan, sidoo kale waxaa lagu dari doonaa kooxda.
Ivan Perisic iyo Denzel Dumfries waa inay ka shaqeeyaan garbaha daafaca ee Simone Inzaghi shaxda 3-5-2, halka Matteo Darmian iyo Federico Dimarco ay yihiin xulasho adag oo kayd ah.
Gooldhaliyaha ugu sareeya Edin Dzeko – oo kaliya labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii Juve ee Serie A – ayaa ku wehlin doona Lautaro Martinez afka hore.
Inter waa kooxda ugu badan ee Juventus garaacday Serie A -ga – waxay ka adkaatay 85 -jeer, 44 -bareejo iyo 47 -guul ayay u heshay Nerazzurri.
Inter ayaa badisay kulankeedii ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda ku wajahday Juventus – kuma aysan badinin gurigeeda oo ay ku garaacday Bianconeri tartankan tan iyo 2010, markaasoo uu Jose Mourinho ahaa tababaraha.
Inter ayaa laga yaabaa inay lumiso kulamada Serie A oo xiriir ah markii ugu horreysay tan iyo bishii Maarso 2020